२२ चैत - खासमा म प्राय एक्लै खान रुचाउँछु। अरु खाजाका लागि रेस्टुरेन्टमा जाँदा साथी चाहिन्छ। तर, मःमः साथी नचाहिने खाजा हो।
५ फागुन - ‘पाठकमाथि अख्तियारले छानविन र कार्वाही नगर्ने हो भने ‘त्यहाँ अरु मानिस पनि यस्तै छन् कि’ भन्ने पर्छ। यसको असर अख्तियार र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी छनोट गर्ने निकायको छविमाथि पनि पर्छ।
२७ माघ - ‘अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्यो, राजनीति र कुटनीतिको संयोजन मिलेन, ठाडो भाषा प्रयोग भयो’ भनेर जुन हंगामा मच्चाइएको छ नि अहिले, बक्तव्यमा त्यस्ता शब्द प्रयोग भएकै छैनन्।
२४ माघ -
१९ माघ - कांग्रेसीहरु बीपीलाई ‘एसियाको लेनिन’ भनेर चिनाउँथे। तर नेवि संघ र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै झन्डा र त्यहाँ रहेका चार ताराको अर्थ थाहा थिएन।
१० माघ - भन्छन् नि, ‘घटना र पात्रहरु सबै काल्पनिक हुन्, कसैको जीवनसँग मेल खाएमा त्यो संयोगमात्र हुनेछ।’ त्यस्तै हो, त्यतिबेलाको मेरो स्टाटसपनि।
१ माघ - त्यतिबेलाको नेपाली समाजमा बहुविवाह, शोषण तथा महिला र निमुखामाथि चरम अत्याचार हुन्थ्यो। यो कुरा दरबारमा नहुने कुरै थिएन।
१९ पुस - ‘नेपालले राजा महेन्द्रको पालादेखि नै भारत र चीनलाई सन्तुलन गरेको गर्‍यै गरेर अहिलेसम्म आएको छ। श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारत र चीनबीच कसरी सन्तुलन बनाउने भनेर नेपालबाट सिक्न सक्छन्।’
पारसलाई कसैले मान्दैनन्, राजा त ज्ञानेन्द्र वा हृदयेन्द्रलाई बनाउने हो: कमल थापा (अन्तर्वार्ता)
१३ पुस - ‘अहिले जुन परराष्ट्रनीति सञ्चालन भइराखेको छ, त्यसप्रति दुबै छिमेकी सशंकित छन्। यो प्रबृति बढ्दै गयो भने उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्नसक्ने आँकलन गरी नेपालमा हस्तक्षेप वा प्रभाव बढाउन सक्ने खतरा म देख्छु।’
१० पुस - ‘हामी एसर्टिभ भएकाले वासिङ्टन डिसी बोलाइएको होइन, उनीहरु एसर्टिभ भएर बोलाइएको हो। वासिङ्टन जानुअघि थाहा पाउनु पर्‍यो– हामीलाई किन बोलाइएको हो? हामीसँग उनीहरुको अपेक्षा के के छन्?’
२२ मंसिर - निगमलाई इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन (अाएटा) मापदण्डमा पुर्याउने योजना छ। त्यसका लागि आएटामा आबेदन पनि दिइसकेका छाैं
सचिवालयले लिड गर्न सकेन, अब स्थायी कमिटीबाट अगाडि बढ्छौंः घनश्याम भूसाल (अन्तर्वार्ता)
१२ मंसिर - अब सचिवालयले बैठक बोलाएन भने स्थायी कमिटीका सदस्यहरु एक ठाउँमा जुटेर सचिवालयलाई कसरी ठीक ठाउँमा ल्याउने भनेर छलफल सुरु गर्ने हो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषय त्यसैले निर्धारण गर्छ। सचिवालयले आफूलाई सच्याएन भने त्यो काम स्थायी कमिटीबाट गर्छौं।
२ मंसिर - ‘जब सरकार पार्टीको एजेण्डा बन्दैन भने पार्टीले के गर्छ? सरकारको एजेण्डा पार्टीमा राखिएको छ, तर त्यसबारे छलफल भएको छैन। त्यसैले पार्टीले धेरै कुरा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन।’
मन्त्रीले चिफ मिनिस्टरसँग दोहोरो कुरा गर्न पाउँदैन: मुख्यमन्त्री पौडेल (अन्तर्वार्ता)
१८ कार्तिक - ‘संसदीय व्यवस्थामा मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि मन्त्रीले दोहोरो कुरा पनि गर्न पाउँदैन। यस (प्रदेश) को सिस्टम के हो भने सबै निर्णय गर्ने अधिकार चिफ मिनिस्टरमा हुन्छ।’
कामदार आवश्यक भएकाले मलेसिया सम्झौताबाट पछि हट्न सक्दैन: मन्त्री विष्ट (अन्तर्वार्ता)
१३ कार्तिक - देशभित्रै रोजगारी अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो। अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर सरकारले केहि दिनपछि व्यवस्थित रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ।
छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिनु भारतका लागि सुरक्षा खतरा होः सीताराम येचुरी (अन्तर्वार्ता)
११ कार्तिक - बिमस्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच कुराकानी भयो। तर त्यहाँ 'मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ' भएको देखियो।
चिनियाँ सेनासँग नेपालले पृथक ढंगले टाइअप गर्न खोज्या होइनः रक्षामन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
११ कार्तिक - नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध पृथक ढंगले, नयाँ ढंगले वा अन्यथा रूपले अगाडि बढाउन खोजेको होइन। हामीले स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको हैसियतले आफुलाई लाभ पुग्ने हिसाबले विभिन्न मुलुकहरूसित द्वीपक्षीय सम्बन्ध बढाइरहेका छौं। त्यसैको सिलसिलामा चीनसित पनि हो।
११ असोज - ‘सरकारी कर्मचारीका रुपमा ३९ वर्ष काम गर्दा आफ्नो छवि स्वच्छ राख्दै यहाँसम्म आईपुगेको छु। अबका दुई वर्षमा मैले त्यो छवी धुमिल बनाउने छैन। खुला सडकमा शीर ठाडो पारेर हिड्न सक्ने गरी म आयोगबाट बाहिरिनेछु।’
३१ भदौ - विश्व नै इलेक्ट्रोनिक्स सवारी साधनप्रति अकर्षण हुन थालेको छ। त्यसको बजार दिन प्रतिदिन बिस्तार भइरहेको पनि छ। नेपालमा भने अहिले नै त्यसको माहोल बनेको भन्न सकिँदैन। मानिसहरु वातावरणमैत्री बन्नको लागि, वातावरण प्रदुषणमुक्त बनाउने अभियानमा सहयोग...
१८ भदौ - अहिले पनि मान्छेहरू तीन/चार दिन हिंडेर घर जाने गरेका छन्। सडकको अवस्था मात्रै सरकारले राम्रो बनाउन सके देशले छिटो विकासको गति लिन्छ। यो बिना कुनै क्षेत्रको विकास संभव छैन।
२६ साउन - बसन्त चौधरी भन्छन्ः बोल्न नसकेपनि स्वर्गारोहणका बेला नारायण गोपालका आँखाले केही बोल्न खोजेजस्तै लाग्थ्यो, उहाँले ‘यो पीडामा म बाँच्न चाहन्न’ भन्न खोजिरहनुभएको थियो
२४ साउन - पेशा र पदीय संवेदनशीलताका कारण सेनाका उच्च अधिकारी हम्मेसी खुल्दैनन्। तर घरविदामा जानुअघि प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री नेपालखबरका सीताराम बरालसँगको लामो वार्तामा खुलेर प्रस्तुत भए।
१० साउन - हामी डा. केसीको आन्दोलन लम्बिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छैनौं। दुई तिहाई छ भन्दैमा सडकको आवाज दबाउन मिल्छ?
६ साउन - सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रतिपक्षले समर्थन गरे हुन्छ, समर्थन गर्न सकिँदैन भने चुप लागेर बसे हुन्छ। ‘हामी प्रतिपक्ष हौँ, जसरीपनि विरोध गर्नुपर्छ’ भनेर विरोधका विषयमात्र खोजेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
मेरो वशमा हुन्थ्यो भने थुप्रै गोविन्द केसी क्लोनिङ गर्थें: डा. अर्जुन कार्की (अन्तर्वार्ता)
५ साउन - डा. केसीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेकै उनको नैतिक आभा हो। उनीसँग नैतिकताको जुन शक्ति छ, त्यसले न्यायको लडाइँमा असाधारण बल प्रदान गर्छ।
१ साउन - एक सय दिनको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जाल भत्काउन सफल भएका छौं। हामीले देखाएको स्पष्ट चित्र के हो भने सरकारी निकायको सहकार्यमा सुन तस्करी शून्यमा झार्न सकिन्छ।
३ असार - ‘एण्टी करेन्ट मुभ’ मा जाने अवसर तपाईं (ओली र प्रचण्ड) हरुलाई छ। दुबै जनाले रछ्यानमा बसेर जुठो नखोतल्नुस्, जनताको चाहना के छ, कार्यकर्ताको के छ, सगरमाथाको उचाईमा बसेर हेर्नुस्। अहिले वामपन्थीलाई दिएको समर्थन भोलि नरहन पनि सक्छ। यो कुरा बुझ्नुस्।’
१७ जेठ - चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याउन पाइलट खोज्नका साथै निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिन्छ कि भनेर साेचिरहेका छाैं
१७ जेठ - ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन, उर्जा सहयोग, रेलमार्ग र पारबहन सम्झौताको तयारी गरिएको छ।’
७ जेठ - केपीसँग त मेरो ‘दोस्ताना’ हो, त्यस्तो ‘दोस्ताना’ माधबसँग कहिलेपनि भएन। सँगै रक्सी खानेदेखि लिएर रुनेसम्म हामीले गर्‍यौं। मलाई कार्वाहीको माग गरेपनि, त्यो दोस्ती त मसँग छँदैछ।